ရေရှည်တည်တံ့သည့် စိုက်ပျိုးရေး စားနပ်ရိက္ခာ စနစ် ထူထောင်ခြင်းဖြင့် အားလုံး အကျိုးကျေးဇူး ခ?? - Yangon Media Group
ရေရှည်တည်တံ့သည့် စိုက်ပျိုးရေး စားနပ်ရိက္ခာ စနစ် ထူထောင်ခြင်းဖြင့် အားလုံး အကျိုးကျေးဇူး ခ??
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၈
ရေ ရှည်တည်တံ့သည့်စိုက်ပျိုးရေး စာနပ် ရိက္ခာစနစ်ထူထောင်နိုင်ရန် သီးနှံ အာမခံစနစ်တစ်ရပ်ကို အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်း၍အကောင် အ ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူ တောင်သူများ သာမကတန်ဖိုးကွင်းဆက်တစ် လျှောက်ပါဝင်ပတ်သက်သူ အား လုံးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးခံစား ရမည်ဖြစ်ကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေး မြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးဦးလှကျော်ကပြော ကြားခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာ ၈ ရက် နံနက်ပိုင်းက နေပြည်တော်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူ ရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန စုဝေးခန်းမ၌ကျင်းပသည့် သီးနှံ အာမခံဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားရာ တွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”ကျွန်နော်တို့နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာ စိုက်ပျိုးထုတ် လုပ်သူ တောင်သူတွေဖြစ်တဲ့အ တွက် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဟာအလွန် အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလိုနိုင်ငံမှာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေ အရ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ ကျရောက်ဆုံးရှုံးရပြီး မကုစားနိုင်ရင် စားနပ်ရိက္ခာမဖူလုံမှုကနေ အကျိုး ဆက် ရလဒ်ဆိုးတွေနဲ့ နိုင်ငံစီးပွား ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှောင့်နှေးနေ မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အာဆီယံ ဒေသအတွင်း အခြားသောနိုင်ငံတွေ ရဲ့ သင်ခန်းစာအတွေ့အကြုံတွေကို အခြေခံပြီး ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ စိုက် ပျိုးရေးစားနပ်ရိက္ခာစနစ်ကို ထူထောင် နိုင်ဖို့သီးနှံအာမခံစနစ်တစ်ရပ်ကို အစိုးရနဲ့ ပုဂ္ဂလိကတက်ညီလက်ညီ ပူးပေါင်းပြီး၊ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာ စိုက်ပျိုးထုတ် လုပ်သူ တောင်သူတွေသာမက တန် ဖိုးကွင်းဆက်တစ်လျောက် ပါဝင် ပတ်သက်သူအားလုံးအတွက် အကျိုး ကျေးဇူးခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်”ဒုတိ ယဝန်ကြီးဦးလှကျော်မှပြောကြား ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်အနေနှင့်လည်း တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားမြှင့် တင်ရေးဥပဒေနှင့်နည်းဥပဒေများ ကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်နှင့် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် များတွင် အသီးသီးပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ ပါကြောင်း၊ ယင်းအထဲတွင်လယ်ယာ သီးနှံတွေကို အာမခံထားခွင့်ဆိုသည် ကို ပုဒ်မခွဲတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်သွင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါကြောင်း၊ ယင်းအပေါ် တွင် အခြေခံပြီးယနေ့သီးနှံအာမခံ ဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း ဆက် လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
'ငြိမ်းချမ်းရေး တွဲလက်များ မြစ်ဧရာမှထပ်ဆင့်ပွား'ခရီးစဉ်ကို ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်း တစ်လျှောက် န??
ကျောက်စိမ်းစေတီတော်ကြီး၌ ယာဉ်ရပ်နားစခန်း တည်ဆောက်မည်
မြန်မာလိုင်စင်ရ ကန်ထရိုက်တာများ၊ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရုံးခန်းသစ်ဖွင့်လှ??